यी हुन् सुन तस्करीका नाइके,यिनै संग किन प्रहरीको हुन्छ बाक्लो उठबस ? « हाम्रो ईकोनोमी
यी हुन् सुन तस्करीका नाइके,यिनै संग किन प्रहरीको हुन्छ बाक्लो उठबस ?
नेपाल प्रहरीले बिभिन्न स्थानबाट अबैध सुन बरामत गर्न थालेपछि सुन तस्करका नाईकेहरु छटपटाउन थालेका छन् ।
घ्याम्चोको सुन पटक पटक बरामत भएपनि उनि भने कानुनको कमजोरीको फाईदा उठाउँदै उम्कन सफल भएका छन् । २०६९ सालमा काठमाडौं परिसरले बरामत गरेको १६ किलो, २०७० मा काभ्रेमा लुटपाट भएको १२ किलो, त्यसको लगत्तै काठमाडौं प्रहरीले बरामत गरेका ८ किलो सुनका मालिक घ्याम्चो थिए । तर उनी १६ किलोमा प्रहरीको अनुसन्धानमा तानिए पनि राजश्व अनुसन्धान बिभागले जोगाएको थियो ।
सामान्य चेकचाँचमा सुन बरामत हुदैन, बिना सुचना बाटोमा हिडेको गाडीलाई नियन्त्रमा लिएर ४,५ घण्टा खानतलासी गर्न सम्भब नहुने हुदा सुन तस्करी मौलाएको हो । दिनको सयौं गाडी केरुङ नाकाबाट काठमाडौं भित्रीन्छ । ति गाडी मध्य २,४ वटा गाडीबाट सुन पास हुँदै आएको छ।
सुन बोक्ने र क्यारिङ गर्नेको चहलपहलमा शंखा लागे तस्करीकै सदस्यहरुले प्रहरीलाई खबर गर्दै आएका छन् । वा भरियाले केही सुन लुकाएर प्रहरीलाई आफै खबर गरी पक्राएर जेल बस्न तयार हुन्छ ।